Faarax Macallin Oo Hadal Qiiro Leh Ka Jeediyey Dhagaxbuur - Jigjiga Online
HomeSomalidaFaarax Macallin Oo Hadal Qiiro Leh Ka Jeediyey Dhagaxbuur
Dhagaxbuur (JigjigaOnline) – Gudoomiye kuxigeenkii hore ee baarlamaanka dalka kenya Mudane Farah Mo,alim Daware oo kamid ahaa waftigii labada madaxwayne ee maanta dhagaxbuur booqday ayaa wuxuu khudbad dhinacyo badan taabanaysa kasoo jeediyay hoolkii Xafladu Kasocotay.
Mudane Daware ayaa ugu horayn kahadlay xifhiidhka Labada qoomiyadood ee soomaalida iyo oromada oo wada daga wadamada Ethiopia iyo Kenya, wuxuuna sheegay in labadan umadood ay waxbadan wadaagaan, islamarkaana uu aad ugu faraxsanyahay in colaadii shalay lagu badalay wanaag iyo isu soo dhawaansho, isagoo hadalkiisa kudaray in Soomaalida iyo oromadu ay yihiin kuwo lagu murmo midka midka kale kasoo farcamay.
Dhankakale wuxuu kahadlay xaalada itoobiya ee maanta iyo shalay, isagoo kasheekeeyay xiliyo ay adkayd inuu dalkiisa soo booqdo ogaadana xaalada umadiisu kusugantahay, balse uu dhibka iyo dhaawacaba lawadaagi jiray, wuxuuna kubooriyay Shacabka deegaanku inay wax laqabsadaan wadanka itoobiya, isagoo tusaale usooqaatay qoomiyada oromada oo shalay gu,itaan ku dagaalamaysay inay maanta itoobiya hogaanka uhayso. Mudane Daware ayaana carabka kuxajiyay in soomaalidu kafaa,iidaysato walhtiga.
Farah Daware oo ah siyaasi caan ka,ah gayiga geeska afrika ayaa taariikh dheer kuleh difaacida iyo garab istaaga shacabka DDS gaarahaan oo uu kasoojeedo iyo guudahaanba dhulka soomaaliyeed.